Home / Ụwa / Ala Igbo / Enyimba FC meriri Etoile du Sahel
ndiigbokwenu1 April 12, 2016	Ala Igbo, Sport Leave a comment 841 Views
Enyimba FC meriri Etoile du Sahel’ si Tunisia 3 – 0 n’isọmpi bọọlu ha gbara na Port Harcout n’ụbọchị ụka gara-aga. Ha mere nkea iji gosi mmadụ niile na ha dị njikere inweta ọnọdụ na CAF Champion League.
Onye nyere ha mmeri bụ Mfon Udoh, ya bụ onye nyere goolu atọ eji merie ndị Etoile du Sahel. Goolu atọ a kwalitere ole goolu Udoh nwere kita ruo 7 n’egwuregwu isọ mpi a.
Goolu izizi ya bịara na nkeji Itoolu mana Udoh ezurọ ike ebeahu. Na nkeji Iri-ise na isii, Udoh hụrụ ohere ọzọ inye goolu nke abụọ. Nkea mere ka Enyi Aba deruo obi ala n’ihi na mmeri dị ha nso. Ndị igbo sị ụzọ dị nma a gaa ya ugboro abụọ, onwerọ mgbe ha sị onye nwere ike iga ugboro atọ agana. Ya mere mgbe Udoh hụrụ ohere ọzọ na nkeji iri-asatọ, ọ nyere goolu nke atọ.
Enyimba na Etoile du Sahel ka ga-agbakwa ọzọ na April 19. Unu ga-echeta na Enyimba FC bụ naanị Clọbu si Naijiria fọrọ n’ime Isọmpi Afrika.
Enyimba FC	2016-04-12
Previous Nri ndị South East kacha dị nma n’ahu – Onye ọkachamara
Next Naedum Domnwachukwu bụ onye mmeri na 2016 Edison Scholars Program
Ikperikpe Ọgụ! Egwú dike na-agba. Egwú anyị ji eje agha. Egwú eji amaara ndị n’adịghị ...